म २० वर्षकी भएँ । मैले आफ्नो केटा.साथीसँग धेरै पटक यौन' सम्बन्ध राखेकी थिएँ । अहिले उसले मलाई छोडेको एक वर्ष भयो । मेरो परिवारबाट अर्को के टासँग विवाह गराइँदैछ । म भर्जिन छैन । त्यसैले मैले यौन सम्बन्ध राखेको थाहा हुन नदिन के गर्नुपर्छ ? मेरो भनाइको अर्थ फेरि भर्जिन हुन के गर्नुपर्ला ? तपाईंहरू बीच सहमतिमै यौनसम्बन्ध भएको देखिन्छ । यद्यपि सहमतिमै भएका यौनसम्पर्क समस्याविहीन हुने भने होइनन् । भाग्यवश तपार्इं अनिच्छित गर्भ वा यौनरोगको समस्या भोग्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुभएन । सम्बन्धको स्थायित्व एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, तर तपाईंको केटासाथीसँगको सम्बन्धले निरन्तरता पाएन । सम्बन्धले निरन्तरता नपाउँदा त्यसका शारीरिक तथा मानसिक समस्या भोग्नुपर्ने स्थिति त आउँछ नै, जुन अहिले तपार्इंले भोग्नुपरिरहेको छ । कौमार्यताको कुरा विशेष गरेर केटीको कौमार्य विकसित मानव सम्यताको मात्र नभै पहिलेदेखि नै
चायाँ छाला’सम्बन्धी एक प्रकारको स’मस्या हो । टा’उकाको छालाबाट मरेका कोषहरू बाहिर निस्के’पछि त्यसलाई नै चाँया भनिन्छ । गर्मी सम’यमा भन्दाबढि जाडो सम’यमा चाँयाले धेरै सताउने गरेको पाइन्छ । तर कति’पयलाई गर्मी मौसममा पनि चायाँले सता’एर हैरान भएको पाइन्छ । टाउकोमा परेको चा’याँको असर अनुहार’मा पनि पर्ने भएकाले मानिसहरु आफ्नो सौन्दर्य’का लागि निकै चिन्तित हुन्छन् ।चायाँ ह’टाउने केही घरेलु उपायहरु यस्ता छन्- एक कप दहीमा एक कप वेसन मिला’एर कपालमा राम्ररी लगाउने र करिब दुई घन्टा’पछि धुने । यो प्रक्रिया केही दिन ल गातार गरेमा चायाँ हट्दै जानेछ । कपालमा नियमित रुपले नविरलको शुद्ध ते’ल लगाउँदा पनि चायाँ हट्छ । अम:ला र रिट्ठा मिसा’एर टाउकोमा लगाउने र यस’को दुई घन्टापछि धुने गरेमा पनि चायाँ हट्छ । नुहाउ’नुभन्दा एक घन्टा अगाडी संधै का’गतीको रसले टाउको मालिस गरेमा पनि केही हद’सम्म चायाँको सम
काठमाडौँ । अहिले मानिसहरु चिकित्स उपचार पद्धतिमा मात्र भर नपरी आयुर्वेदिक पद्धतिइ पनि अगालिरहेका छन्। किन भने चिकित्सा पद्धतिका धरै साइड इफेट रहेको हुन्छ त्यसैले बजारमा अहिले थुपै जडिबुटी औषधि पाइने गर्दछन। आज हामी तपाइलाई हाम्रो वरपर पाइने दुधे झारको बारेमा हामी चर्चा गछौ। जुन झारको प्रयोगबाट थुपै रोगको उपचार गर्न सकिन्छ। दुधे झार सेतो दुध जस्तो रस निस्कने काण्ड भएको पोथ्रा वर्गमा पर्ने औषधीय गुण भएको वनस्पति हो। यसलाई नेपालीमा दुधे झार, अंग्रेजीमा कमन स्पर्ज भनिन्छ। यसको बिरुवालाई ‘आस्थमा प्लान्ट’ भन्ने गर्दछ। किनकि यो दम रोग (आस्थमा) को घरेलु उपचारमा प्रयोग हुन्छ। उक्त बिरुवामा ट्राइटरपेन, फाइटोस्टेरोल्स्, टानिन्स्, पोलिफेनोल्स्, फ्लाभोन्वाइड्स, इसेसिन्यल आयल, अल्कल्वाइड्स, सापोनिन्स्, एमिनो एसिड्स, मिनरल्स् (खनिज पदार्थहरु) पाइन्छन्। आस्थमाको चियाले सुख्खा खोकीलाई नरम बनाएर
काठमाडौ भुइँकटहर स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिके फाइदा जनम मानिन्छ । यसको सेवन प्राय धेरै मानिससहरले गरेका हुन्छन् । यो खादा स्वादिष्ट मात्र हैन स्वास्थ्यको दृष्‍टिले पनि फाईदाजनक हुन्छ । यो प्राय गाँउ घरमा पाइने गर्दछ । भुइँकटहरले ह्दयसम्बन्धी रोग तथा क्यान्सरजस्ता रोगबाट जोगाउँछ । भुइँकटहरले आँखाको क्षमता बढाउँछ ।भुइँकटहरमा सोडियम कम तथा पोटासियम बढी पाइन्छ, जसले गर्दा शरीरमा रक्तचाप सन्तुलित हुन्छ । भुइँकटहरमा पाइने केही इन्जाइमले पाचनसम्बन्धी समस्याबाट जोगाउँछन् । भुइँकटहरको नियमित सेवनले हात–गोडाको नङ फुस्रो हुने समस्या समाधान हुनुका साथै तौल पनि घट्छ । भुइँकटहरमा फाइबर, पोटासियम, फोस्फोरस, क्याल्सियम, भिटामिन सी आदि तत्व पाइन्छन् । दाँतका रोगीका लागि भुइँकटहर निकै उपयोगी सावित हुन्छ । भुइँकटहर खाँदा जोर्नीको समस्यामा फाइदा मिल्छ ।
हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुँदा देखिन्छन् यस्ता स,ङ्केतहरू, खानुहोस् यी खानेकुरा जसबाट रगत बढाउन मद्दत गर्छन्..
काठमाडौँ । शरीरमा रगतको कमी भएपछि विभिन्न प्रकारको रोगले सताउने गर्दछ। महिलाहरुमा सबै भन्दा धेरै रगतको कमीको समस्या देखिन्छ। रगतको कमीलाई एनिमिया भनिन्छ। यसले शरीरमा आयरनको कमी हुन्छ र रगत बन्न कम हुँदै जान्छ। वास्तवमा एनिमियाको कारण भनेको अनियमित जीवनशैली र खानपान हो। जब शरीरमा रगतको कमी हुन शुरु हुन्छ तब मानिस एनिमियाको शिकार बन्छ। एनिमियाको लक्षणहरु चिन्न धरै गार्हो छैन, किनभने यो सजिलैसंग थाहा हुन्छ एनिमिया भएपछि शरीरमा हरेक समय थकान अनुभव हुन्छ। उठ्दा र बस्दा चक्कर लाग्छ र बेहोश हुने पनि एनिमियाको लक्षण हो। एनिमिया भएपछि आँखा र त्वचामा पहेलोपन हुन्छ र सास फेर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। शरीरमा कमजोरी आउनुसंगै प्रायजसो अलिकति हिड्दा पनि सास फुल्न थाल्छ। एनिमियाबाट बच्न सबैभन्दा राम्रो तरिका आफ्नो खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो खानामा हरियो सागपात पनि समावेस गर्नुपर्छ । चुकन्दर,
कहिले काही पटक-पटक पिसाब लाग्छ। यसको एउटा मात्र कारण हुँदैन। सामान्यतः धेरै पानी वा तरल पदार्थ पिएको बेला पिसाब लाग्छ, जो स्वभाविक हो। त्यस्तै कहिले मानसिक कारणले समेत पिसाब लागेको अनुभव हुन्छ। गर्भावस्थामा वा बुढ्यौलीमा पनि धेरै पटक पिसाब लाग्छ, जसलाई सामान्य मानिन्छ। तर, सामान्य अवस्थामा पटक-पटक पिसाब लाग्छ भने, त्यसले शारीरिक समस्याको संकेत गर्छ। के भनिन्छ भने, पिसाब कति पटक फेरिन्छ भन्ने कुराले समेत हामी कति स्वस्थ्य वा अस्वस्थ्य छौ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्छ। हाम्रो जीवनशैली वा स्वास्थ्य खराब भएमा पटक-पटक पिसाब लाग्न सक्छ। दिनमा कति पटक पिसाब आउनु पर्छ ? एक दिनमा कति पटक पिसाब फेरिन्छ ? त्यसले हाम्रो स्वस्थ्यबारे बताउँछ । सामान्यत एक दिनमा चारदेखि १० पटकसम्म पिसाब लाग्नु सामान्य हो । औसात व्यक्तिको मुत्राशयमा जति पिसाब जम्मा हुन्छ, त्यसलाई तीनदेखि पाँच घण्टासम्म अवधी रोक्न स
के तपाईलाई थाहा छ करेलाका फाइदै-फाइदा ! हेर्नुहोस् यस्ता छन् करेला खानुका अनगिन्ती फाइदाहरू
एजेन्सी । खादा तितो अनि व्लड प्रेसर लो भएकाले धेरै खान नहुने हामीले तरकारीको रुपामा प्रयोग गर्ने फलनै तिते करेला हो । तीते करेलाको केहि फाईदा यस्ता छन्:- खानामा रुचि बढाउँछ, छालाको सङ्क्रमण, चिलाउने खटिरा, घाउ आदिलाई हटाउँछ, खाएको कुरा राम्ररी पचाउँछ, पेटसफा राख्दछ, कब्जियत हुन दिँदैन, पेटसम्बन्धी विभिन्न रोगजस्तै, ग्याष्ट्रिक, अल्सर आदिलाई कम गर्दै लैजान्छ, रगत शुद्धीकरण गरी सफा राख्न मद्दत गर्छ, मधुमेह रोगीलाई, इन्सुलिनको काम गर्छ । यसले छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगजस्तै यस्तै हात खुट्टाका जोर्नी दुख्ने वा बाथ रोग भएको, पिसाब पोल्ने, पत्थर भएका, अम्लपित्त, हैजाजस्ता रोगमा करेलाको सेवनबाट फाइदा गर्छ । यस्तै तीतेकरेलालाई उमाल्दा यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट उत्पन्न हुन्छ, जसले क्यान्सरको सम्भावनालाई घटाउँछ । औषधिको रूपमा तीतेकरेलको हरेक भाग जस्तै फल, पात, बियाँ, जरा आदि विभिन्न प्रकारका रोगको उ
हृदयघात पछिल्लो समय धेरै जनाको समस्याको विषय बनेको छ । हृदयमा कुनैपनि समस्या भएर काम गर्न नसक्दा कति मानिसले यसकै कारण ज्यान समेत गुमाउनु परिरहेको छ। मानिसको हृदय सही रुपले काम गर्नको लागि अक्सिजन युक्त रगतको निरन्तर आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ। हृदयमा यसरी रगत प्रवाह गर्ने रक्त वाहिकाहरुलाई कोरोनरी धमनी भनिन्छ।यदि यो धमनीहरुमा बाधा सिर्जना भयो भने हृदयमा रगतको आदानप्रदान रोकिन पुग्छ। जसको परिणाम स्वरुप व्‍यक्तिको मृत्यु समेत हुने सम्भावना हुन्छ। धमनीहरुमा बाधा उत्पन्न हुनु वा रगतको आदानप्रदान रोकिनुको पछि कैयौं कारणहरु हुनसक्छ। यो धमनीहरुमा जम्मा भएको कोलिस्ट्रोल र फ्याट अधिक हुँदै जाँदा यस्तो समस्या सिर्जना हुने गर्दछ। यसलाई एथेरोस्क्लेरोसिस समेत भन्ने गरिन्छ। यो स्थितिमा धमनीहरुको फैलावट या संकुचनमा बाधा सिर्जना हुनसक्छ। जसको कारण हृदयले आवश्यक मात्रामा अक्सिजनयुक्त रगत पाउन सक्दैन
अभिनेता तथा बिग बस १३ का बिजेता सिद्धार्थ शुक्लाको बिहिबार हृदयघातका कारण मृत्यु भएको छ । ४० वर्षका सिद्धार्थको मृत्युले सबैजना चकित छन् । कूपर अस्पतालले हृदयघातका कारण सिद्धार्थको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । सिद्धार्थ फिट थिए र उनलाई मुटु सम्बन्धि केही पनि समस्या थिएन । यस्तोमा सिद्धार्थको अचानक मृत्यु हुँदा धेरैजना शोकमा छन् । साधारणतया मुटु सम्बन्धित रोग एक उमेरपछि मानिसहरुमा देखिने गर्छ तर पछिल्लो एक वर्षमा हृदयघातका कारण युवाहरुको मृत्युमा वृद्धि भएको छ । युवामा मुटुसँग सम्बन्धित रोगका मुख्य कारण के हुन् त्यसबारे जानकारी लिऔं । हुन त हृदयघातको कुनै निश्चित समय हुँदैन । व्यक्ति जुनसुकै बेला पनि यो रोगको चपेटमा आउन सुक्छन् । तर यति हुँदा हुँदै पनि हृदयघात हुनु एक महिना अघि यस्ता केही लक्षण देखिन्छन् जसबारे व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ । असाध्यै थकाई लाग्नु, निद्रा नलाग्नु, सास फेर्न
भक्तपुरको लोकनथलिमा एकजना सानो देखिने तर उमेरले निकै ठुलि भैसकेकि बहिनी रहन्छिन् ।उनको नाम हो सोनिका तामाङ ।सोनिकाको कद जति सानो देखिन्छ उमेर उतिनै बढि छ ।उनी हेर्दा ५-७ बर्षको देखिन्छिन् तर बास्तवमा उनी पन्ध्र बर्षको भैसकिन् । बिहान बेलुकानै छोपेजस्तो हुने दात किटिटि खाने र दात किटिटि आफैले गर्दागर्दै मुखका सबै दातहरुनै झरिसकेको छ ।हातखुट्टा एकदमै लुला र आँखा पुरै डेडो छ सोनिकाको । नत हिड्न सक्छिन् नत बोलेन सक्छिन् नत अरु केही नै गर्न सक्छिन् ।उ सगैका अरु केटाकेटीले भने अहिले क्याम्पस पढ्ने भैसके तर अहिले उनिचहि यस्तो अवस्थामा छिन् । दिन गयो हप्ता गयो महिना गयो अनि बर्षौ बर्ष गयो तर सोनिका कहिल्यै यस्तो छट्पटाहटबाट फिरिनन् ।झार फुक धामि झाक्कि पनि नलगाएको हैन तर अह निको भएन् ।अन्तर्बार्ताकै क्रममा उनलाई खै के ले हो छोपिहाल्यो उनका हात खुट्टाहरु बटारिए आँखा आकाशतिर हेर्न थाले मुखब